Porn ကကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုထာဝရပျက်စီးစေသလား။ (The Daily Dose) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Porn ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ထာဝစဉ်ဘဝအသက်ပျက်စီးခဲ့သလဲ (The Daily ဆေးသောက်ရန်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ရံဖန်ရံခါထွက်ခွာသွားနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုတတိယဘီးကိုယူဆောင်လာခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပြောင်းလဲသွားစေသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်မှာရှိသည်ဖို့ရလျှင်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက - http://www.damemagazine.com/2014/02/26/has-porn-ruined-our-sex-lives-forever#sthash.Ncsn3JDw.aSzTKUFy.dpuf
ရံဖန်ရံခါချွတ်ရ, ဒါပေမယ့် Third-ဘီးပြောင်းလဲသွားပြီ၌ဆောင်ခဲ့ခြင်းငှါ
လိင်ဆက်ဆံပုံ ငါတို့ရှိသမျှသည်မှာရှိသည်ဖို့ရလျှင်။ - ထပ်မံကြည့်ရှုရန် -
ကျနော်တို့ရံဖန်ရံခါ may, ပယ်ရ, ဒါပေမယ့် Third-ဘီးကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံလမ်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သောမြင်၏။ ကျနော်တို့မှာအားလုံးကရှိသည်ဖို့ get လျှင်။
porn ရှာဖွေခြင်းအချို့အားထုတ်မှုယူလေ့ရှိတယ်။ ဒါဟာ (ဖေရဲ့အိပ်ရာအောက်မှာကြိုးစား) သတ္တိ, ကိုယ်ပျောက်နှင့်တည်နေရာစုံစမ်းနေကြပြီပါဝင်ပတ်သက်။ အဆိုပါ prize-huzzah! ၏ Hidden stack Playboy!ဒီနေ့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများကယဉ်နီးပါးရယ်စရာကောင်းသော -was ။
အခုတော့မည်သူမဆို, ဘယ်နေရာမှာမဆို, သူ့အတွက်အနည်းငယ်ကလစ်ပျောက်သောသူယောဟနျသ Mayer နဲ့တူဖြစ်ခြင်းမှ နာမည်ကျော် Playboy အင်တာဗျူး“ ငါအိပ်ရာမထမီယောနိ ၃၀၀ ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်နေ့များရှိနိုင်သည်။ ” သို့သော်သူတွေ့ရှိခဲ့သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်မှာ ပို၍ ပင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကကျွန်မရဲ့မျိုးဆက်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုလုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်” ဟု Mr. Body-Is-a-Wonderland Man ကပြောကြားသည်။ "ဒါကတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းရဲ့စိတ်ပညာကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မလဲ။ ရပြီ။
ဘာ မ က .0001 စက္ကန့်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ပတ်နည်းနည်းစိတ်တောင်းဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမျှဆွရှာတှေ့နိုငျသောအခါအကျွန်ုပ်တို့၏ psyche ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်စိတ်, ငါတို့ဆက်ဆံရေးကိုလုပ်ဖို့?
ကအများကြီးထွက်လှည့်အဖြစ်။ porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုဆက်ဆံရေး, ကြှနျုပျတို့ကိုကြည့်ပင်လမ်းနှင့်အတူ mucking ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့နည်းလမ်းတွေရေတွက်ပါစို့:
1 ။ porn ပြတ်တောက်လိင်စေပါတယ်။
"တခြားဘယ်အရာကမှငါ့အဘို့မ, မပင်အစစ်အမှန် pussy" ဟုဂျိုးဇက်ကဂေါ်ဒွန်-Levitt ရဲ့ပြောပါတယ် porn-addled အတွက်ဇာတ်ကောင် ဒွန် Jon။ အတူ-သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးလိင်ဆက်ဆံထွက်အဲဒီမှာသူ့ကိုလိုလူတွေအများကြီးရှိပါတယ် အနားမိတ်ဖက် -unsatisfied ။
"avid porn အသုံးပြုသူများကနေသောအမျိုးသားများနှင့်အတူလိင်ထားရှိခြင်းသည်ကိုယ့်သို့ masturbated ခံတာနဲ့တူခံစားရ၏။ ဒါဟာရငျးနှီးမဲ့ခံစားရ, "19 နှစ်အရွယ် Alaska * ကပြောပါတယ်။ သူ့ကိုငါနှင့်အတူအိပ်ရာများတွင်တင်သောနေစဉ် "ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် masturbate လိမ့်မယ်။ ကြှနျတေျာ့အခနျးကဏ်ဍကိုဖွင့်စရာဖြစ်ရနျဖွစျသညျ။ တခါတရံသူကခဏ porn ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါနှင့်အတူအလိင်ဆက်ဆံချင်ပေမယ့်အချိန်အများစုကိုသူသညျမိမိပြီးမြောက်ရန်ပိုနှစ်သက်မယ်လို့ပါတယ် "ဟုဧလိရှဗက်, 19 ကပြောပါတယ်။ ဘရိုင်ယန် Moylan, အယ်ဒီတာ-In-အကြီးအကဲအာရုံကြောဟောင်း၏ Vice ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်, ယေဘုယျအားဖြင့်လည်း, သူ့ရည်းစားနှင့်အတူညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့် likes ပေမယ့်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခံစားခဲ့ရသိရသည်။ "ကျနော်တို့ fuck ဆိုတဲ့နှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေနဲ့ကျွန်မ (နှင့်တခါတရံတွင်အပြန်အလှန်) မိမိတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာမယ့်တစ်ဦးအပိုဆောင်းထည့်သွင်းလိင်ကစားစရာပေါ့တူသောကျွန်မခံစားမိသည့်အခါကြိမ်ရှိပါတယ်။ "
အမူအကျင့်ကုထုံး Andrea Kuszewski “ တစ်စုံတစ် ဦး သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရရန်လှုံ့ဆော်မှုအချို့ကိုအလွန်အမင်းအားထားလျှင်၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုမရှိသောကြောင့်နှိုးဆွရန်ခက်ခဲစေနိုင်သည်။ ” သူမက "ဒါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရတာအဓိကပြproblemနာပါ။ လူတစ်ယောက်ကအသစ်အဆန်းနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့စံနှုန်းကနေစတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။ ရင်းနှီးမှုအပါအ ၀ င်တခြားလှုံ့ဆော်မှုအားလုံးဟာနှိုင်းယှဉ်မှုတွေမှေးမှိန်လာတယ်"
သိကြ-သို့မဟုတ်ခံစားရ-သူတို့ဘာတွေပျောက်ဆုံးနေသူကိုလူတို့အဘို့, စိတ်ခံစားမှုချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းအမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ရငျးနှီးမှုနှငျ့အမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းအပေါ်အထဲကပျောက်ဆုံးနေတာထင်ပါတယ်။ porn လိင်ခံစားချက်တွေကိုမပါဘဲလိင်ရှိသည်ဖို့လူငယ်တွေကိုသွန်သင်, "Alaska ကပြောပါတယ်။
2 ။ ချိတ်-ups အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောစိုးစံ။
ချိတ်-ups အသစ်အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။ ထိုသူတို့ကမကြာခဏပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအဓိက option ကိုနေတူသောယခု မှလွဲ. သူတို့ပုံရသည်။ "ဒီယောက်ျားတွေနေ့စွဲမဟုတ်မည်။ သူတို့က "မှတ်ချက်ချချိတ်-up, လိင်ချင်နှင့်မိန်းကလေးမှမိန်းကလေးတစ်ဦးထံမှသွားပါ ဒေါက်တာ GAIL ထမင်းစားခန်း၏စာရေးဆရာ Pornland: Porn ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ဖူးဘယ်လိုဒနှင့်တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်တဦး Porn ယဉ်ကျေးမှုကိုရပ်တန့်။ ထမင်းစားခန်းသူတို့မှားယောက်ျားတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်နေတာစဉ်းစား, အမျိုးသမီးငယ်မကြာခဏသူတို့ချိတ်-Up ပြီးနောက်ချိတ်-Up ရှိခြင်းပြီးနောက် "တစ်ခုစိတ်ခံစားမှုရက်နာ" အဖြစ်ကိုဖော်ပြရန်ဘယ်အရာကိုခံရနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ကပြောပါတယ်။
"ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေချိန်းတွေ့ယူတာပဲ," အသက်ကြီးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ကိုပိုမိုနှစ်သက်သူကို Madison, 26 ဆိုပါတယ်။ "တစ်ဦးကအလွယ်တကူခက်ခဲကြက်တစ်စိတ်ကူးအရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ '' ထွက်ဆွဲထားဖို့တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူ texted ခံရဖို့ထက် Viagra ၏ထွန်းနှင့်အတူကျွန်မအများကြီး wooed ခံရဖို့ပိုနှစ်သက်င့်ပြီးနောက်ကြည့်ရှုလျက်, (ထို့နောက် preordained နာရီမှာကောင်းမွန်စွာ fucked) adored '' တစ်ပါတ်မှုအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှကြားပြီးလျှင်မဟုတ်ပြီးနောက်။ "
3 ။ porn မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်သတ်မှတ်။
"ငါသည် 21 ခဲ့သည့်အခါ, ငါ '' ဟေ့, ငါသည်သင်တို့၏မျက်နှာကိုလာနိုငျမညျနညျး 'တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ကိုတောင်းဆိုနေတာစိတ်ကူးဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်," Anastasia, 32 ကပြောပါတယ်။ "ဒါကပင်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ရပြီမဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့်ယခုဖြစ်၏။ "
သငျသညျအသစ်သောအရာကြိုးစားနေသို့ဆိုလျှင် porn လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုနေရာလေးကိုအရင်းအမြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အသက်အရွယ်နုပျိုသောမိန်းမတို့သည်အလျင်အမြန် threesomes သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ထိုးနှက်အလုပ်အကိုင်များတောင်းခံသူကိုလူတို့အထဲက freaked နိုင်ပါသည်။ "ဒီမိန်းကလေးငယ် porn ယဉ်ကျေးမှု၏ထိခိုက်သေဆုံးမှုနေကြတယ်" ဟုထမင်းစားခန်း Dame ကိုပြောသည်။ "ဒီယောက်ျားတွေစအိုလိင်ဆက်ဆံချင်တယ်။ သူတို့ကကြမ်းတမ်းလိင်ချင်တယ်။ သူတို့ဟာသူတို့အမည်များကိုမခေါ်, သူတို့ကဆံပင်ဆွဲလိုပါးရိုက်လို။ အဘယ်အရာကိုမိန်းကလေးများနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူးဒီအညစ်ညမ်းယဉ်ကျေးမှု၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုအပေါ်တိုက်ရိုက်ထုတ်ကစားလျက်ရှိကြောင်းဖြစ်၏။ "
porn အိပ်ဆောင်နှင့်အိပ်ခန်းထဲမှာနောက်ခံတေးဂီတ၏အမြင်နှင့်ညီမျှဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကြည့်ရှု desensitized ရနိုင်သည်။ လွင်ပြင်ဟောင်းပုံမှန်လိင်-သောစကားမစပ်မှိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ဖြစ်လာ paroxysms သို့ဆယ်စုနှစ်၏စုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့လေးတွေစေလွှတ်ပြီလိုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများမှာလာကြသည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အစွန်းရောက်ပြုမူသောအမှုတိုးမြှင့်ပြသမှုနှင့်အတူ, porn ၏အမာခံမျိုးကွဲစေပါတယ်။
"ဒါဟာသင်ကတွန်းအားပေးနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဝေးအကြောင်းကိုတကယ်ရဲ့" ထမင်းစားခန်းကပြောပါတယ်။ "သူတို့ကသငျသညျမိန်းကလေးတစ်ဦးအရှက်နှင့်ချိုးသည်အထိသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်တွန်းနိုင်ပါတယ်ရုံဘယ်လောက်ဝေးမြင်ချင်တာပေါ့။ "
ဒါပမေဲ့အံ့သွ, အစွန်းရောက် porn ၏မြင့်တက်အမှန်တကယ်စိတ်ခံစားမှုဆက်သွယ်မှုများအတွက်တဏှာ၏ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလိင်စိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်ဘာကိုစဉ်းစားပါလျှင် "သူကသင်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရန်သင့်စိတ်ခံစားမှုကွန်နက်ရှင်ပါပဲ။ သင်ပယ်ရှားတော်မူပါလျှင်သင်သည် porn ကိုပြုကြသကဲ့သို့, သငျသညျအခြို့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူကဖြည့်စွက်ရန်ရရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့နှင့်အတူအကဖြည့်စွက်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျက်ဒေါသ, ဒေါသ, မုန်းတီးမှုဖြစ်ပါတယ် "ဟုထမင်းစားခန်းကပြောပါတယ်။ "babyish, ထူးထူးဆန်းဆန်း, သင်အသစ်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုအတွက်ယူလာစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပျင်းစရာနှင့်ငွီးငှေ့ဖှယျဖြစ်၏။ "
4 ။ ကျွန်တော်တစ်ဦးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ဿုံဒဏ်ငွေခဲ့ကြသည်ထင်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများတိုးလာစိစစ်။
အမြိုးသမီးမြားကိုအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်အကြောင်းကိုမလုံခြုံသလိုခံစားရတယ်ပါပြီ။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောမိန်းမတို့သည် + porn ကိုကြည့် = ခန္ဓာကိုယ် dysmorphia (လူတိုင်းကိုလူဦးရေ) ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ "ကျနော့်ရဲ့လိင်အင်္ဂါအတော်လေး porn အတွက်လိင်အင်္ဂါနဲ့တူကြည့်ရှုဘူး။ အကြှနျုပျ၏အစာအိမ်သူတို့အဖြစ်ပြားချပ်ချပ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်, ငါ့ရင်သားအဖြစ်ကြီးမားသောကြဘူး။ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းကသောအခါ, ငါနှင့်အတူပါအမှားတစ်ခုခုရှိခဲ့ကဲ့သို့ငါ့ကိုအကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာနှင့်အတူတကယ်မလုံခြုံဟုခံစားရလုပ်, "Alaska ကပြောပါတယ်။
Anastacia ယခုသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင် porn-စောင့်ကြည့်အလေ့အထများနှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်လာသည်, ဒါပေမယ့်သူမအသက်ငယ်စဉ်အခါကနဦးသူမ၏ရည်းစားရဲ့အလေ့အကျင့်အားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ "ငါသည်ဤလူမျိုးသည်ငါ့လိုမကြည့်ပါဘူး '' စဉ်းစားမိတယ်။ ဒီအတောအတွင်းသူကို double-D ကိုရင်သားနှင့်အတူဆံပင်ရွှေရောင်သို့င်ပါသလား '' ငါဒါကြောင့်ငါကအကြောင်းတော်တော်မလုံခြုံခဲ့တဲ့အနက်ရောင်ဆံရှင်မရယ်။ "
အခုတော့ဆီမှရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောနိနဲ့ buttholes ချွတ် သို့မဟုတ်-ဘာငရဲ? -ပန်းရောင် ''em တက်။ ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင် 30 အောက်မှာမိန်းမတို့အဘို့ Non-တည်ရှိသည်။ (ယခုသျောလညျး, pubes တစ်တစ်ကျော့ပြန်အောင်ခံရဖို့ပုံရသည်။) ထိုထက်သောရှိခဲ့ရဲ့ uptick labiaplasty အတွက်ရွေးကောက်ပွဲခွဲစိတ်ပယ်ဖြတ်ခြင်း ဿုံကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ bits သည်။ ဟုတ်ကဲ့, သင်ျာဖတ်ပါ။
သောကြောင့်, creepily, အ harshest တရား labia, Boob ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အစိတ်အပိုင်းများ, အဆီးခုံမို့မို့-ဆံပင်များမှာ အလွန်အစိတ်အပိုင်းများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဣတ္လိင်သတ်မှတ် (အစတွေ့မြင်: နောမိ Wolf ကန့် အဆိုပါအလှအပ Myth ဟာ) ။ ဤသည်ဣတ္ arousal-ဆိုသညျကားတစ်ခုတွေကမှားစရာနိမိတ်လက္ခဏာ, တစ်ဦး tinier ပေါ့ပါးတဦးတည်းသို့ shaped ခံရဖို့ပြောင်းလဲလိမ့်မှောင်မိုက်, engorged-စေခြင်းငှါ, labia ကြောင်းအရာတစ်ခုခုအတွက်တစ်ဦး effed-up, အခွအေနေဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဘယ်လိုကဒီကျနော်တို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်ပေးပို့ဇီဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်ပြမှုများနှင့်အတူ screwing စေခြင်းငှါ,
5 ။ ဘယ်လိုစနစ်တကျမှမသိသောသူအမျိုးသားများအတွက် shtup အမျိုးသမီးတစ်ဦး။
သူတို့ porn အတွက်သူတို့ကိုမြင်သောကြောင့်, "ဒီရာထူးယောက်ျားသင်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ Ugh ။ သူတို့ကစိတ်ထိခိုက်, "Alaska ကပြောပါတယ်။ "ထိုသူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတျထဲမှာအမျိုးသမီးအော်ဂဇင်နှင့်အတူဒီဇိုင်းမခံခဲ့ရပါ။ "
ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောင့်သေချာပေါက်ယောက်ျားတွေ '' အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ porn လိင်ပညာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလတန်းကျောင်းပုံစံဖြစ်လာသည်။
"ဟုသူကကြည့်ဖို့လိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပျမ်းမျှ 12 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို Google သို့ '' porn '' ချပြီးသည်မဟုတ် '' ငါ့ကိုပေးနေရတာကိုငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့, '' ထမင်းစားခန်းကပြောပါတယ်။ "ထို့နောက်သူသည်သူအကြမ်းဖက်မှုများဤလောကသို့ catapulted ရရှိ, ရင်သားသို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်းအမျိုးသမီးများကိုကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ထင်၏။ သူတို့မတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကိုသတိရပါ။ သငျသညျ 12 င်သောအခါ, သင်တို့တဘက်၌တိုင်းတာရန်ရရှိပါသည်တစ်ခုတည်းသောအရာပါပဲ။ "
porn အမျိုးသမီးအလိုဆန္ဒနှင့်မည်သို့အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့အမျိုးသမီးများတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပုံဖော်နှင့်အတူအတိအကျစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်၎င်းတို့၏အထွတ်အထိပ်မှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြလို့ပဲ။ ကြည့်ရှု technique ကိုသင်ယူဖို့ကရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကျိန်းသေမှားအရပ်မှလာပါတယ်။ "အမြိုးသမီးမြားအပျြောအပါးကိုလက်ခံရရှိရန်ဒီဇိုင်းနှင့်အတွေ့အကြုံကို၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုအများတို့သည်လည်းအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများကိုကျော်လိမ္မာခြော့အပေါင်းတို့နှင့်တကွအမျိုးမျိုးစည်းချက်ဖိအားကနေ orgasm ဖို့အစပျိုးလိုက်ခြင်းနေကြတယ်" ဟုနောမိ Wolf ကရေးသားခဲ့သည် မိန်းမအင်္ဂါအခေါင်း။ "ဒီလျင်မြန်သောအရာလိင်ဆက်ဆံမှု၏လိင်ဆက်ဆံမှု-ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့သမားရိုးကျမော်ဒယ်များ၏ညစ်ညမ်းမော်ဒယ်ရည်မှန်းချက်-oriented, linear နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဒေသများ၏ဆွအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မယ့်များစွာသောမိန်းမအဘို့အထိုသို့ပြုမှမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်-ဖြစ်ပါတယ် အနည်းဆုံးမကအရမ်းလေးနက်လမ်းအတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့အာရုံကြောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုစနစ်များ၏အလားအလာ၏ထိုကဲ့သို့သောအပေါ်ယံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကပါဝင်ပတ်သက်နေသောကြောင့်။ "
ယောက်ျားမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိဆုံးမဩဝါဒ ပေး. နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူရောဘတ် Kandel, တဦးတည်းမြည်းစမ်း, ယောက်ျားများစိတ်အားထက်သန်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကကွန်နက်ရှင်နဲ့ရငျးနှီးချင်ပေမယ့်သူတို့ကမကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိပါတယ် "ရှင်းပြသည်။ အဆိုပါ cum ရိုက်ချက် porn နှင့်လိင်အတွက်အဆုံးစွန်ယခုအချိန်တွင်လိုမဖြောင့်သည်။ တစ်ဦးဆင်ဖိုနီ၏အထွတ်အထိပ်အဆုံးမှာ crashing အဆိုပါခွက်ကွင်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အဓိကသရေကျမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့တပြင်လုံးကိုစီးနင်းခံစားရန်ယောက်ျားတွေပညာပေး။ "
6 ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ခံစားနေရပြီးအမျိုးသားတွေ။
"porn ထံမှထပ်မံကျအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောကိစ္စများ၏ပုံစံ၌ငါ၏အလေ့အကျင့်၌ထပြသထားတယ်" လိင်ကုထုံးကပြောပါတယ် ဒွန် Shewey။ "porn များ၏အလွန်အမင်း Formula contortions ပွားခြင်းနှင့်ကပျော်စရာမဟုတ်ဘူးကွောငျးတှေ့ဖို့ကြိုးစား, သူတို့ကသူတို့ပြဿနာရဲ့အထင်သူကိုယောက်ျားများ; ဒါကြောင့် (cue အပေါ်ခက်ခဲ get တစ်ဦး jackhammer တူသော fuck ဆိုတဲ့နှင့်အခါတိုင်းပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲ spurt) တစ်ဦးညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်နဲ့တူဖျော်ဖြေဖို့သူတို့အလုပ်သူတို့ရဲ့ထင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်သူတို့ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းထင်နှင့်ထိုထော့နဲ့စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့ပျော့ဖွံ့ဖြိုးသောသူယောက်ျားတွေ ကမဖြစ်နိုင်လိင်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမှစေသည်; သူတို့ကမည်သည့်မိတ်ဖက်လိမ့်မည်ယူဆသောကွောငျ့ပင်ယနေ့အထိကြောက်လန့်နေသောလိင်နှင့်အတူအများကြီးကို real-ဘဝအတှေ့အကွုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုသူတို့ကမဖြစ်နိုင်ရန်ခက်ခဲတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့ရှေ့တော်၌အထှတျအထိပျမှတွေ့ရသောညစ်ညမ်းမှာရှာဖွေနေ masturbating ဒါနေသားတကျနေသောယောက်ျားတွေနဲ့ယောက်ျားတွေ သူတို့ကိုတိုင်းစိတ်ကူးလိင်လုပ်ရပ်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထား။ "
အဘယ်သူမျှမဖွင့်ကဒီမှာငြင်းခုံကြောင်းညစ်ညမ်းသွားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်မနှင့်အတူစကားပြောကျွမ်းကျင်သူအများစုက porn ကျန်းမာ, ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးအတွက်နေရာတစ်နေရာရှိပါတယ်သူကပြောပါတယ်။ ဒါဟာစုံတွဲများကသူတို့ကိုပူရရှိသွားတဲ့အဘယ်သို့သောအကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြု, အမျိုးမျိုးမှလူရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်လှစ်, ဒါမှမဟုတ်ပဲအော်ဂဇင်တစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းကြောင်းပေး, အအထီးကျန်ဖို့အဖော်ထုတ်ချေးတစ်ဦးရောဂါ-အခမဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ "ကျနော့်ဘဝကိုယ့်ငါ့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဖွင့်ကြောင့်ပြုရရရှိသွားတဲ့ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေချင်တယ်, အခုအချိန်မှာဒါအလုပ်များဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲကိုမိနစ်နဲ့ကျွန်မကောင်းသောပေါ့, "27 နှစ်အရွယ် Stevie ကပြောပါတယ်။
porn သည်အလွန်ထူးကဲကောင်းမွန်ပြီးပျော်စရာအမျိုးမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်၎င်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ထိုအသေး ... ငါတို့အချို့အဘို့, ဒါဟာငါတို့အများစွာသောအဆက်ပြတ်, desensitized, ပုံသေနည်းချစ်သူများအောင်, ငါတို့ဆက်ဆံရေးအတွက်တတိယဘီးဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် dopamine၊ မရေမတွက်နိုင်သောအမျိုးမျိုးနှင့်အမြဲတမ်းတိုးပွားလာသောလှုံ့ဆော်မှုများကြောင့်အထီးကျန်နေသော masturbaters များဖြစ်လာနိုင်ရန်တလိုတလားရှိပါသလော၊
(ယာယီ) တွင်ညစ်ညမ်းချွတ်ရရန်သူ၏အားထုတ်မှုအသေးစိတ်သူကို Moylan Porn Quit နှင့်လုံးဝသင့်အသက်တာပျက်စီးမလုပ်နည်း အဆိုပါ conundrum ကဉျြးရုံးဖျော: "သင်ကနေရာမှရှိပါတယ်သိရန်နှင့်ဖြည့်ညှင်းအတွက်အသုံးပြုရန်လျှင် Porn ကြီးလှ၏။ ငါက desensitization နှင့်လေ့အပြုအမူတွေကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်ထင်ပေမယ့်ဘာမျှမပိုမြန်ငါ့ကိုလားပေးသည်။ "
မှရေးသား ကို Jill Hamilton က